सर्वोत्तम तरिकामा वेब र एसईओ विकास कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
जब तपाईंको वेबसाइट अनलाइन पदोन्नति कार्बनिक ट्राफिकमा लोकोमोटिव पावरको रूपमा बढ्दै गएको छ, तपाईले निम्न छोटो छलफललाई विचार गर्नुपर्दछ. मलाई विश्वास छ कि हरेक अनलाइन रैंकिंग पदोन्नति अभियानले दुवै हातमा नजिकको दाहिने हात सहि वेब र एसईओ विकासमा भर पर्दछ. यसलाई सामना गरौं - खोज इञ्जिन अनुकूलन एक कीवर्ड सामग्री शोध को बारे मा अधिक छ, एक उचित सामाग्री मार्केटिंग रणनीति संग समर्थित छ. तर अहिले पनि धेरै टेक्निकल पहलहरू दृश्य पछि आउँदैछन्. तर विशेष रूपमा ती तकनीकी मुद्दाहरू SERP हरूको सूचीमा हरेक वेब पृष्ठ निर्धारण निर्धारण गर्दैछन्. मेरा मतलब छ कि जब तपाइँको एसईओ गरिरहेको छ, तपाई सधैँ तपाईको वेबको लागि प्रत्येक वेब पृष्ठको लागि कोडिंगको सही प्रक्रियालाई विचार गर्नु पर्छ।.
अनुक्रमणिकाको लागि स्वागत हुनुहोस्
वेब पेज र एसईओ विकासको लागि पहिलो कुरा निश्चित गर्न निश्चित छ तपाईंको वेबसाइट को प्रत्येक भाग को अनुक्रमणिका को लागी कम से कम सुलभ छ, मेरो मतलब छ कि "पढने" देखि तपाईंको क्रमांक डेटा को प्रत्येक टुकडा देखि क्रलिंग रोबोटहरुलाई ब्लक गर्न को लागी केहि नहीं. यस तरिका अभिनय गर्दै, म खोज इन्जिन को दृष्टिकोण देखि, तपाईंको वेबसाइट को प्रारंभिक रूप को जाँच गर्न को लागि Google Search Console को क्रल सेक्शन को "Fetch" कमांड को उपयोग गर्न को सिफारिश गर्छु. यहाँ केवल एक कोर सुझाव छ - HTML ढाँचामा सबै चीज राख्न प्रयास गर्नुहोस्, केवल मुख्य महत्वको वेब पेजको लागि Flash वा Silverlight प्रयोग गर्नबाट बचाउनुहोस्।. यदि सबै कुरा सही देखिन्छ, र तपाईंको वेबसाइट कम्तिमा अनुक्रमणिका छ, तल तपाईले राम्रो उपयोगकर्ता अनुभवको लागि एक छोटो छोटो युक्तिहरू देख्नुहुनेछ, साथसाथै सम्भावित उच्च रैंकिङ खोजी ईन्जिनियरिङ्हरू द्वारा सम्मानित गरिनेछ।.
तपाईंको वेब पेज URL हरू वेब र एसईओ विकासको सन्दर्भमा, र अझ राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभवका लागि मुख्य महत्वका तत्वहरू हुन्।. खोज रोबोट द्वारा "समझा" को लागी सजिलो सम्भव छ तपाईंको यूआरएलहरू साथै साथ साथै वास्तविक प्रयोगकर्ताहरु द्वारा पढ्नको लागि. कुनै पनि अनावश्यक URL डेटाबाट छुटकारा पाउनुहोस्, जुन Google लाई वा तपाईंको वेब पेजहरू भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई भ्रममा ल्याउन सक्छ. एकै ओरबाट, तपाईंको यूआरएलहरूको लागि कुनै अप्टिमाइजेसनले मानिसलाई क्लिक गर्न सम्भावना कम गर्नेछ, यसलाई साझा नगर्ने. एकै समयमा, सर्च इन्जिनहरू केहि निश्चित कठिनाइहरूको सामना गर्न सक्दछन् जब "विशेष" एक विशेष कीवर्डसँग सम्बन्धित हुन्छ.
एक उचित वेब पेज र एसईओ विकास को विचार मा ध्यान दिनुहोस, तपाईंको यूआरएल निम्न पैरामीटर द्वारा अनुकूलित गर्नुहोस:
हरेक वेब पृष्ठ URL सम्भव हुन सकेन र जानकारीपूर्ण हुनुपर्छ. म तपाईंको URL हरूसँग आदर्श मिलान गर्नको लागि केवल तपाईंको र सान्दर्भिक खोजशब्दहरू वा वाक्यांशहरूसँग तपाईंको URL हरू सिफारिस गर्दछु.
तपाईंको URL हरु खोजशब्दहरु संग तुच्छ नहीं गरेको छ, अनुक्रमणिका को लागि रास्ता को रूप मा स्पष्ट छ को रूप मा राख्नुहोस. यसो गर्दा, सबै लागतहरूमा स्टक शब्दहरू बहिष्कार गर्न सम्झनुहोस् (जस्तै सबैभन्दा हालका व्यक्तिहरू: "द," "," "," "ए," आदि।. )
तपाईंको यूआरएलमा शब्द अनुक्रम अलग गर्न सधै हाइफन प्रयोग गर्नुहोस्. Underscores को बारे मा बिर्सनुहोस्, जस्तै कि खोज इञ्जिनले तिनीहरूलाई पहिचान गर्न सकेन. त्यो स्वाभाविक रूपले क्रमांकन र अनुक्रमणिकाको लागि केही तेज क्षमताहरू ल्याउँछ.
तपाईंको कुञ्जीपाटीको महत्त्वपूर्ण महत्व प्रत्येक यूआरएलको सुरुवातसँग नजिक राख्ने दायाँ कुञ्जी वाक्यांश क्रम राख्नुहोस्. सम्झनुहोस्, तिनीहरूको तर्कको अनुसार, खोजी इञ्जिन बटहरूले ती स्टार्टर किबोर्डमा अझ जोड दिन्छ.
वैसे, तपाईंको URL को छोटो सम्भव राख्न को लागि अर्को कारण हुनेछ, म. ई. , तपाईंको खोजशब्दहरुको कुल वजन URL मा बनाए राखन र बढयो. तथापि, तथापि, तपाईंको URL हरू स्वाभाविक रूपले पुन: टेप गर्नुहोस्, जस्तै कि तिनीहरू लेखिएका सामग्रीका मात्र टुक्रा थिए. यसो गर्दा, तपाइँले कुनै स्प्याम वा कम गुणस्तर सामग्री समस्या कम से कम गर्न सक्नुहुनेछ Source .